Filtrer les éléments par date : samedi, 09 novembre 2019
samedi, 09 novembre 2019 19:50
Soamandrakizay: Lasa toeram-pamokarana zanakazo hiatrehana ny taom-pambolenkazo ho avy
Zanakazo manodidina ny 8 000 000 isa no hovokarin’ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra, hiatrehana ny taom-pambolenkazo ho avy izao.
Eny Soamandrakizay, nandraisana ny Papa Ray Masina tamin’ny fitsidihana masina notanterahiny teto Madagasikara ny fiandohan’ny volana septambra 2019 lasa teo, no toerana natokana hanaovana izany ho an'ny Faritra Analamanga.
Ireo mpiasan’ny Ministera no manatanteraka izany teny an-toerana isaky ny Talata sy Zoma.
samedi, 09 novembre 2019 19:40
Ambohibola RN 44: Fiara mpitatitra notafihin’ny jiolahy, voaroba ny mpandeha ary nisy naratra
Lasibatry ny mpanakan-dalana teo Ambohibola, tanàna anelanelan’i Morarano Gara sy Ambohimanarivo amin'ny lalam-pirenena faha-44, ny fiara mpitatitra olona iray, manao lava alina, niainga tao Amparafaravola ny zoma 8 novambra 2019 hiazo an'Antananarivo Renivohitra.
Nanao fanamiana toy ny an’ny mpitandro filaminana ireo olon-dratsy, sady nirongo basy sy zava-maranitra. Nampiasa vato sy hazo no nataon’izy ireo sakan-dalana, sady nanapoaka basy, mba hampijanona izay fiara mandalo.
Voaroba daholo ireo mpandeha tao anaty fiara. Lasan'ireo jiolahy ny entana sarobidy, toy ny firavaka sy vola. Nisy ireo mpandeha naratra noho ny kapoka sy daroka nahazo azy ireo.
Fianarantsoa: 17,41% ny taham-pahafahana Bakalôrea andiany manokana
Nivoaka androany ny voka-panadinana Bakalôrea andiany manokana natao ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 ho an’ny Faritanin’i Fianarantsoa. 17,41% ny taham-pahafahana ankapobeny.
Ny foibem-panadinana Manakara no ambany indrindra ny vokatra: 5,96% ny taham-pahafahana, foibem-panadinana Imito, Distrikan’i Fandriana kosa no tsara indrindra ny voka-panadinana: 62,90%.
Hafa kely: Kabone mangaraharaha
Vita amin’ny fitaratra mangaraharaha ny varavaran’ilay trano fisainana na kabone miorina ao amin’ilay anjerimanontolo ao Androy.
samedi, 09 novembre 2019 19:04
Rina Randriamasinoro: « Tsy haka taninareo, fa hiaro ny fananareo aho »
Teny amin’ny Boriborintany Voalohany no nanohizan’i Rina Randriamasinoro, kandida Ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra ny fampielezan-keviny androany maraina.
« Fotoana fampielezan-kevitra izao, ka tsy izao no hanaovana asa fa rehefa lany aho dia tena hiasa isika ary hiasa ho anareo aho, vitatsika izany », hoy ity kandidan’ny Tiako i Madagasikara ity. Noraketiny anaty takela-taratasy ny fandaharanasa ankapobeny hotanterahiny, ary nozaraina tamin'ny olona tamin'ireo toerana rehetra notsidihiny izany.
« Tsy haka taninareo, fa hiaro ny fananareo aho », hoy i Rina Randriamasinoro nanome toky ny mponina amin’ny faritra iva, velona ahiahy manoloana ny fikasan’ny kandida sasany hanototra tany hanorenana fotodrafitrasa.
samedi, 09 novembre 2019 14:14
Brezila: Nivoaka ny fonja ny filoha teo aloha Lula da Silva
Nahazo fahafahana i Luiz Inacio Lula da Silva rehefa notazomina am-ponja nandritra ny 580 andro. Voampanga ho nanao kolikoly sy fanadiovam-bola izy ary nomelohin’ny fitsarana higadra valo taona sy folo volana sazy mihatra.
Niaro tena, nanohitra hatrany ny fiampangana sy fanamelohana azy i Lula. Mpitsara enina no nanaiky ny hanafahana azy, dimy kosa nandà nandritra ny fitsarana omaly. Omaly zoma 8 novambra, hariva ihany dia efa nivoaka ny fonjan’i Curitiba nitazomana azy i Lula da Silva.
Filohan’i Brezila teo anelanelan’ny 1 janoary 2003 ka hatramin'ny 1 janoary 2011 i Lula. 74 taona izy ankehitriny.
samedi, 09 novembre 2019 14:07
Mahabo: Amperin’asa Rafidson Yves Norbert, Sefo Cisco vaovao
Tontosa ny 7 novambra 2019 ny famindram-pitantanana teo amin’i Mahefa Jean Oliver, Sefo Cisco teo aloha teto Mahabo sy Rafidson Yves Norbert, Sefo Cisco vaovao mandimby toerana azy. Nanome voninahitra ny fotoana ny avy amin’ny Talem-paritry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy arak’asa Menabe, Rabe Emmanuel.
samedi, 09 novembre 2019 14:05
Jeneraly Mohajy Ackram: Nodimandry omaly teto Antananarivo teo amin'ny faha-74 taonany
Nindaosin'ny fahafatesana ny zoma 8 novambra 2019 teto Antananarivo ny Jeneraly Andriamandaminy Mohajy Ackram. Efa somary tsy dia salama fotoana lavalava izy, eo koa ny vesatry ny fahanterana. Teraka ny 04 septambra 1945, 74 taona izy izao nodimandry izao.
Manamboninahitra ambony teo anivon’ny Tafika anabakabaka ny Jeneraly Mohajy Ackram.
Efa nitana andraikitra ambony maro teto amin’ny firenena izy. Efa praiminisitra lefitra tamin’ny tetezamita notantanan’ny praiminisitra Ratsirahonana Norbert Lala izy.
Efa Tale jeneralin’ny SECREN (Société d'Etudes, de Construction et de REparation Navales) ary efa Tale jeneralin’ny OMNIS (Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques) ihany koa.
samedi, 09 novembre 2019 09:21
Andriatsima Faneva Ima: Hiatrika lalao farany amin’ny Barea sady hanao veloma ny mpakafy kitra Malagasy
Hamarana ny tantarany ao amin’ny ekipam-pirenena Malagasy amin’ny baolina kitra i Andriatsima Faneva Ima ny sabotsy 16 novambra 2019, mandritra ny lalao iraisam-pirenena hihaonan’i Barea Madagasikara sy ny Walya Etiopianina hatao eo amin’ny kianja monisipaly Mahamasina Antananarivo.
Io no lalao farany handraisany anjara amin’ny Barea ka hisaorany sy hanaovany veloma ireo namolavola azy tamin’ny baolina kitra, ireo mpiara-milalao aminy tao anatin’ny ekipam-pirenena, ireo mpanazatra nifandimby, ny federasionina malagasy ny baolina kitra, ireo mpanohana sy mpankafy baolina kitra malagasy, araka ny taratasy nosoratany omaly.
Kapitenin’ny Barea i Andriatsima Faneva Ima, lohalaharana afovoany mitondra ny laharana faha-9 izy. Isany nanamarika ny tantarany tao amin’ny ekipam-pirenena malagasy ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika taona 2019 tany Egypta. Tonga teo amin’ny ampahefa-dalana ny Barea an’i Madagasikara.
samedi, 09 novembre 2019 09:12
Bakalôrea andiany manokana: 17,61% ny taham-pahafahana ho an’i Toamasina
Nivoaka ny voka-panadinana bakalôrea andiany manokana natao ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 teo, ho an’ny faritanin’i Toamasina. 17,61% ny taham-pahafahana ho an’i Toamasina, 9,75/20 ny naoty farany ambany nifarahana ho afahana taorian’ny adihevitra nafana nandritra ny « délibération » natao omaly tolakandro. Raha natao 10/20 ny naoty ahafahana dia 13,17% ny taham-pahafahana.